Waa kee kursiga ugu adag doorashada Jowhar? | KEYDMEDIA ONLINE
Waa kee kursiga ugu adag doorashada Jowhar?
Doorashada kurasta Aqalka sare ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS, ayaa la filayaa in ay manta ka bilaabato magalada Jowhar ee xarunta Maamul goboleedka Hirshabeelle.
JOWHAR, Soomaaliya – Saddex kursi oo ka mid ah Sideedda kursi ee Aqalka Sare ee taalla Hirshabeelle ayaa maanta lagu dooranayaa magaalada Jowhar ee magaalo madaxda gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana la filayaa in ay noqoto dooraashadii ugu adkeyd tan iyo markii la iba-furay doorashooyinka dadban 29-kii bishii July ee sanadkan.
Kursiga ugu horreeya ee manta la filayo in lagu baratamo ayaa ah kursiga uu afartii sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay Senatar Muuse Suudi Yalaxow, kaas oo ay hadda kula tartramayaan Axmed Xasan Daaci, Cabdllaahi Sheekh Xasan iyo Dr. Xasan Caddaay Cali.
Kursigaan oo ah midka ugu adag, ayay ku loollamayaan, awoodo siyaasadeed oo xooggan, waxaana qeyb ka mid ah musharixiinta garab taagan, Madaxweynayaashii hore ee dalka (Shariif & Xasan) halka uu mid kalana garab xooggan ka helayo Madaxtooyada iyo Gobolka Banaadir.
Xaaji Muuse Suudi Yalaxow, oo ah musharaxa ugu cadcad doorashada kursigaan ayaa xubin ka ah xisbiga uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, UPD, wuxuuna taageero abaabul (Olole) iyo mid maaliyadeed la garab taagan yahay Muuse.
Muuse Suudi, wuxuu ka mid ahaa, hoggaamiye kooxeedyadii Muqdisho, wuxuuna qeyb ka noqday Dowladdii Cabdullahi Yuusuf Axmed, waxaa lagu xasuustaa doorkii uu ka qaatay in dalku uusan dib ugu laaban gacan kali talis afartii sano ee na-weydaaratay iyo garab istaaggiisii Ciidamadii badabaado Qaran ee ka hor yimid muddo kordhintii Farmaajo samaeystay bishii April.
Guddoomihii hore ee degmada Wadajir, Axmed Xasan Daaci, ayaa dhankiisa taageero ka helaya Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, wuxuuna ka mid ahaa saraakiisha maamulka Gobolka Banaadir, ee waqiga badan ku bixiyay la dagaallanka Kooxda Al-Shabaab.
Sanadkii 2014-kii Dowladdii Xasan Sheekh, ayaa weerar ku qaadday Siyasigaan, kadib markii uu diiday in uu wareejiyo xilka Guddoomiha Wadajir, taas oo sababtay in si khasab ah hub ka dhigis loogu sameeyo.
Cabdullaahi Sheekh Xasan, ayaa isna garab xooggan ka helaya Madaxtooyada Soomaaliya iyo Gobolka Banaadir, waxaana qarash la garab taagan Farmaajo, Fahad Yaasiin iyo Cumar Finsh oo doonaya in ay meesha ka saaraan Muuse Suudi.
Xasaradda siyasadeed iyo eedaha ay dhexda ugu jiraan Kooxda Farmaajo, ayaa hoos u dhigi karta rajada Cabdullaahi Sheekh Xasan, waxaana la soo warinaya inuu dadaalkii ugu badnaa hadda ka wado Jowhar.
Dr. Xasan Caddaay Cali, ayaa isna ka mid ah musharixiinta, wuxuuna ka mid ahaa dhaqaatiirta dalka kasoo howl galay muddadii burburka, musharaxaan ayaa la rumeysan yahay in gadaal ka riixayaan ganacsato aad ugu dhow.
Dadka u dhuunduleela doorashada kurasta Aqalka sare ee Hirshabeelle, ayaa saadaalinaya in kusigaaan uu ku soo bixi karo Xaaji Muuse Suudi Yalaxow, oo taageero weyn ka heysta beesha leh kursiga uu ku fadhiyay Baarlamaankii 10-aad ee JFS.
Kursiga 2-aad ee maanta lagu baratamayo, ayaa waxaa sidoo kale, ku tartamaya Senatar Prof. Maxamed Cismaan Dhegajuun iyo Nuur Maxamed Geeddi (Canjeex) halka kursiga 3-aad ay ku loollami doonaan Senatar Fartuun C/qaadir Faarax Karaama iyo Sacdiyo Yarow Aadan.